Abakhiqizi Bezinwele Zomuntu | Fayuan
Abakhiqizi bezinwele abangcono kakhulu babantu be-fayuan
Izinwele Zentombi Yomuntu
Izinwele Zabantu BaseMalaysian
Izinwele Zomuntu waseBrazil
Izinwele Zomuntu waseNdiya
Izinwele Zomuntu wasePeru
I-Lace Wig ephelele
Abakhiqizi Bezinwele Zomuntu
Sinezimpahla ezisezingeni eliphakeme ezisenza sibe enye yezinkampani zezinwele ezingcono kakhulu, imikhiqizo yethu ithandwa emhlabeni wonke kusuka eBrazil, India, Vetnam kuya eFrace, e-Afrika kuya e-USA kanye nenkampani eyodwa e-China.
Umgomo wethu ukwenelisa abathengi bethu ngokunemba okuphezulu nangekhwalithi ethembekile yokuqinisekisa ukuthi wonke amakhasimende angazizwa ekhululekile futhi eqiniseka ngezimpahla zethu emikhiqizweni yazo ye-application.Our uthola kakhulu ukusetshenziswa kwazo emakethe ngenxa yezakhiwo ezinhle. Zinezici eziningi ezivumela ukuthandwa kanye nokusetshenziswa.
Best Natural Natural Wave
Kuvunyelwe okuphindwe kabili, ukuthunga izinsimbi eziwu-100 gramu ngenqwaba ngayinye
Izinwele ze-Virgin Straight Best grade
Isisindo esingu-400 Gram, Isampula se-oda Lokwemukela, Isikhathi Sokulethwa se-2-3 Izinsuku zebhizinisi
Izinwele Zobuntu eziqondile
Sakhetheke Kakhulu izinwele zaseBrazil, Izinwele zasePeru, Izinwele zaseMalaysia, Izinwele zaseNdiya, Izinwele Weave Nokuvalwa Kwezinwele.
Ama-curne wezinwele ama-Curne mannequin uLace Frontal Wig
Izinwele zeBanga le-12A, Izinwele Zombala Wemvelo, Ubude bezinwele eziyi-12-30. Amakhanda we-mannequin wezinwele ezingama-100% athambile, ahlala isikhathi eside futhi kufanelekile ukuthenga, alungele abaqalayo nabalungisa izinwele. Izinwele zeBanga 7A, 8A, 9A ne-10A (iDray Drawn) Ziyatholakala. Umbala Wezinwele Yonke Imibala Yemvelo (Ngaphandle Kwokwenza Umbala), Imibala Emnyama, Imibala Ekhanyayo, Imibala ye-Ombre. Ubude bezinwele 8 ”~ 30”. Isisindo 100G = 3.5OZ Ngasinye Isixha noma Senziwe ngokwezifiso. Yamukelwe Isampula, I-MOQ Is 1 Pack (100G). Ukulethwa Isikhathi Kungakapheli amahora angama-24 uma kunesitoko, izinsuku ezingama-5 ~ 7 uma kwenziwa ngokwezifiso. Isikhathi Sokuthumela Ngokujwayelekile, Izinsuku Zokusebenza Ezi-3-5. I-Paypal Payment, i-Western Union, i-T / T, i-Escrow, i-Money Gram, njll. Isaphulelo Ngokuthenga Okuphelele Kuyatholakala. Ukubuyiselwa kwemali & Ukushintshana Kuyatholakala.
Shaya ingxenye ephezulu yezinqwaba zezinwele ukwenza izimpande zezinwele zihle futhi ziqine ukuze zisebenze ngokulandelayo. thunga ingaphezulu lezinqwaba zezinwele zenze izinwele ze-weft.sew weft wezinwele nokuvalwa noma okwenziwa ngaphambili kube ngama-wigs. geza izinwele, ususe uwoyela wezinwele nothuli, uhlanze izinwele ezingekhohlisayo, wenze izinwele zithambe futhi zibushelelezi. lungisa izinwele njengoba kudingeka, futhi ulungisa amaphethini ukwenza i-hairstyle ihlale isikhathi eside. Sisebenzisa i-fedex noma i-DHL expression for shipping futhi ngezinsuku ezintathu kuya kweziyisikhombisa zokusebenza uzothola i-oda lakho emnyango wakho.
Ukuxhaswa kokuphonsa okuhambisa phansi, i-MOQ iyingxenye eyodwa.
Thumela ngemuva kokuthola inkokhelo ephelele.
Igama leKhasimende, ikheli kanye nenombolo yocingo zingasetshenziswa njengolwazi lokuthumela.
Ungaphrinta ilebuli ye-logo elula unamathisele kwiphakheji.
Finyelela isilinganiso esithile sobukhulu njalo ngenyanga noma ngesonto, thola isephulelo esithile noma ukuhanjiswa kwamahhala kwemiyalo ethile.
Unganikeza amakhasimende akho isipho esincane (i-3D mink eyelash.
Singene ngokuphelele emhlabeni womkhiqizo wamakhasimende ethu. Kepha asihambi nje ezicini ezithile zomkhakha; sibuye sibheke kakhulu emibuzweni enjengokuthi: "Yini eyenza amakhasimende ethu amakhasimende wakho ajabule?" "Singasiqala kanjani isifiso sokuthenga komthengi sokugcina?" Lokhu sizokwenza nawe. Le ndlela siyiguqula kanjani iphrojekthi yakho.
Ama-Wigs Wezinwele we-Fayuan Okokugqoka Kwansuku Zonke
Amawigi wokugqoka kwansuku zonke Manje sebengukukhethwa kwamantombazane amaningi. Abanye abantu bathanda zonke izinhlobo zezinwele kepha abathandi ukudaya okushisayo, ukuze banelise imibono yabo ngokusebenzisa ama-wigs wezinwele ahlukene ukusetshenziswa kwansuku zonke. Kwabesifazane abaningi, ama-wigs wokugqoka kwansuku zonke awafani nozimonyo abalusebenzisa nsuku zonke. Konke kumayelana nokushintsha ukubukeka nokubenza bahle. ama-wigs wokugqoka kwansuku zonke angashintsha isitayela sakho sezinwele, esivumelana kakhulu futhi sishesha. Izinwele zikaFayuan ama-wigs wokugqoka kwansuku zonke zisezingeni eliphakeme, zibukeka zinengqondo, zikhululekile ukugqoka, futhi ungeze imfashini kancane. Ngemininingwane engaphezulu mayelana nama-wigs wezinwele we-fayuan ukusetshenziswa kwansuku zonke, sicela uxhumane nathi.
Ama-Wigs Wangempela Wezinwele Ezimnyama
Ngokuthuthuka kwezinga lokuphila kwabantu, ama-wigs kancane kancane angena ezimpilweni zabantu futhi kancane kancane aba yinto ye-fashionistas. I-Fayuan Izinwele, i-brand wig brand, ihlinzeka ngama-wigs wezinwele zangempela ezinwele ezimnyama. Ama-wigs anezinto eziguquguqukayo eziningi, alungele amadoda, abesifazane nezingane ngokufanayo. Bonke abantu abathanda ubuhle bafanele. Izinwele zibamba iqhaza elibalulekile kumfanekiso jikelele womuntu. Izitayela zezinwele zibukeka kahle kukho konke. Ngokusobala, isitayela sezinwele esikufanele sibaluleke kakhulu. Ama-wigs wezinwele zangempela ezinwele ezimnyama ezenziwe yi-Fayuan Izinwele yi-wigs emnyama ebukeka ingokoqobo. Izwa ibushelelezi futhi ithambile uma uthintwa, izinwele zintsha futhi zikanokusho, ukumbumbuluzwa kuphezulu, kungadayiswa futhi kwenziwe isitayela ngentando, futhi kulula kakhulu ukubanakekela.
I-Curly Wig nge-Curly Bang yezinwele ze-Fayuan
Izinwele ze-Fayuan ngukhiqizi wezinwele zomuntu onguchwepheshe. The i-curly wig ene-curly bang eyenziwe nguFayuan Izinwele azange nje ziguqule isithombe sethu, kodwa futhi zilethe ukukhululeka kanye namathuba ezimpilweni zethu. Ngoba kwabesifazane abathanda ubuhle, ama-wigs wezinwele zomuntu ayasebenza kakhulu empilweni. Ungaba nezinwele ozifunayo ngaphandle kokusika izinwele zakho noma ukuchitha isikhathi esiningi.Ngama-wigs ama-curly amakhulu, abanye besifazane abanezinwele ezimfushane ngezikhathi ezithile bafuna ukushintsha izinwele zabo zezinwele, ama-wigs amakhulu ama-curly awukhetho oluhle. Namuhla, i-curly wig ene-curly bang isiphenduke isesekeli semfashini, ukuyigqoka kungakhombisa ubuhle bobuntu. Khetha i-wig ye-curly ye-Fayuan Hair ene-curly bang ukufaka isitayela esingajwayelekile nesinhle kuwe.
Ama-Wavy amafushane wezinwele ze-Fayuan
Ama-wigs amafushane we-wavy ayizinwele ezimnandi, eziningi zazo ezinikeza abantu umuzwa ococekile nohlanzekile. Uma ufuna ukwenza izinwele zakho ezimfushane zibukeke zizinhle futhi zizinhle, zama izinwele ezimfushane ze-wavy wigs zabantu. Izitayela ezimfushane zezinwele zabesifazane zikaFayuan zinemibala emihle futhi zingokwemvelo ukugqoka, zinikeze umuzwa oqabulayo futhi ofanelekayo. Ngaphezu kwalokho, umphumela walezi wigs ezimfishane unengqondo kakhulu, futhi akukho kuqina kuma-wigs. UFayuan Izinwele ubambe iqhaza embonini yokukhiqiza izinwele zezinwele zeminyaka engu-21 futhi unesipiliyoni esicebile ekuthuthukiseni nasekucwaningeni kwe-wig. Qinisekisa ikhwalithi ye-wig ngayinye, le wig yama-curly emfishane nayo iyihlukile. Khetha Izinwele ze-Fayuan, yenza ama-wigs wezinwele zabantu, njengama-wigs amafushane ama-wavy amaqiniso namaqiniso wemvelo, ukuze ukwazi ukugqoka ngaphandle kokukhathazeka.
Siyinkampani ye-fayuan Human Izinwele eseGuangzhou yaseChina kusuka eminyakeni eyishumi nanye edlule futhi sikhiqiza ukucubungula Imvelo Yemvelo Yezinwele eluhlaza kanye nemikhiqizo eyenziwe ngezinwele zezintombi zabantu ezifana neHuman Hair Extensions kanye neWeft Machine ne-Hand Weft, ukuvalwa, izingaphambili, izandiso, kanye Inqwaba yezinwele ezigcwele i-lace wigs ngaphambili
Sinezimpahla ezisezingeni eliphakeme ezisenza sibe enye yezinkampani zezinwele zabantu ezingcono kakhulu imikhiqizo yethu idumile emhlabeni wonke kusuka eBrazil, e-India, eVennam kuya eFrance, e-Afrika kuye e-USA futhi siyinkampani eyodwa ehamba phambili eChina.
Isisusa sethu ukwenza amaklayenti ethu ahamba phambili kuleli bhizinisi futhi yingakho sinakekela ikhwalithi yethu nokucutshungulwa, ngakho-ke qiniseka lapho wenza ibhizinisi nenkampani yethu ukuthi uthola ama-100% abantu beNwele nekhwalithi enhle kakhulu, yilokho inkampani yethu owaziwa nge.
Siqinisekisa ngemikhiqizo yethu UNGAVULEKILE futhi nempilo yezinwele yinde njengoba igcinekile